Dybala oo shaaca ka qaaday saddexd kooxood uu qarka uu fuulay inuu ku biro sanadkii 2019 – Gool FM
(Turin) 09 Juun 2020. Kubad sameeyaha Juventus ee Paulo Dybala ayaa xaqiijiyay inuu ku dhawaaday inuu ka tago safka kooxdiisa kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkii 2018-2019.
Paulo Dybala ayaa wareysi uu siiyay “CNN” wuxuu shaaca kaga qaaday suurtagalnimada uu kaga tagi lahaa koodiisa Juventus xilli ciyaareedkii 2018-2019 wuxuuna yiri:
“Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, saraakiisha Juventus wax damac ah kuma aysan qabin inay igu tiirsadaan ama aan sii joogo kooxda”.
“Kooxo qaar ayaa durba bilaabay inay xiiso ii muujiyaan sida Manchester United iyo Tottenham, waxayna bilaabeen wadahadal, kaddib waxaa soo muuqatay Paris Saint-Germain”.
“Si toos ah ulalama xiriirin koox kasta, wuxuu ahaa wadaxaajood adag ee udhaxeeyay kooxaha”.
“Si kastaba ha noqotee, hamigeygu wuxuu ahaa mid cad waqtigaas, kaasoo ah inaan sii joogo kooxdeyda Juventus, ma uusan aheyn sanad fiican, qaab ciyaareedkeygana hoos ayuu u dhacay 6-dii bilood ee ugu dambeysay, balse ma dooneynin inaan sidaan uga baxo Juve, sidaas darteed waxaan ku qasbanaaday inaan joogo oo aan si dhab ah u shaqeeyo, isla markaana aan bixiyo waxa aan awoodo”.
“Xaqiiqdii, ma aysan aheyn wax fudud, sababtoo ah rabitaanka Juventus wuu ka duwanaa, balse kaddib markii uu xirmay suuqa kala iibsiga ma jirin waqti igu filan oo aniga heystay, waxaana kooxda macalin u noqday Maurizio Sarri”.
“Waxaan bilaabay inaan horumar badan sameeyo, kooxdana waxay bilaawday inay si fiican u shaqeyso, taasna waxay igu kaliftay inaan joogo oo aan soo bandhigo qaab ciyaareed gaar ah”.
N'Golo Kante oo dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Kooxda Chelsea, kaddib markii Coronavirus...